Kenya oo raadineysa labo sarkaal sare oo Alshabaab ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maree.com: Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa shaaciyey iney ku raad joogaan labo sarkaal oo Shabaab ka tirsan kuwaasoo kasoo jeeda dalka Kenya.
Booliska Kenya ayaa shacabka ka codsaday in ay u soo gudbiyaan wixii aqbaar ah oo ku aadan labadaas sarkaal oo kala Maxamed Kuno, oo sidoo kale loo yaqaano Sheikh Maxamed, Dulyadin (Gamadheere) iyo Axmed Iman Cali, oo isna loo yaqaano Abu Zinira. Midka dambe ayaa Alshabaab ugu magacaaban Amiirka Shabaabka Kenya.
Booliska ayaa sheegay in Kuno uu yahay hogaamiyaha Al-Shabaab u qaabilsan gobolada Jubbooyinka, isagoo sida Kenya aaminsantahay mas’uul ka ahaa weerarada ka dhaca gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Ciidamada booliska ayaa sidoo kale sheegay in Axmed Iman uu yahay madaxa Al-shabaab u qaabilsan soo saarista muuqaalada ay Al-shabaab soo dhigaan baraha internetka oo ay ku sheegtaan weerarada ay geystaan, gaar ahaan kuwii ugu danbeeyay ee ka dhacay magaalada Mandera.
Ku-xigeenka hogaanka danbi baarista ee dalka Kenya, Gideon Kamilu ayaa ka codsaday shacabka dalka Kenya in ay booliska u soo gudbiyaan wixii aqbaar ah oo fududeynaya soo qabashada labadasi horjooge.
Mas’uulkan ayaa shacabka ugu baaqay in qofkii helo xog ku aadan labadasi sarkaal uu ku soo war-galiyo saldhiga booliska ee ugu dhaw.
Maxamed Kuno ayaa macalin ka ahaa Madaraso ku taala magaalada Garissa, ka hor intii uusan sanadkii 2000 ku biirin Al-shabaab.
Axmed Iman ayaa la sheegay inuu ka qalin jabiyay qeybta engineerika ee jaamacada Jomo Kenyatta University ee magaalada Nairobi.
Axmed Iman ayaa sidoo kale ahaa xoghaynta gudiga masjidka Riyadha ee ku yaalo deegaanka Pumwani ee magaalada Nairobi, ka hor intii uusan sanadkii 2009 ku biirin Al-shabaab.
Kenya ayaa sidoo kale rumeysan in Axmed Iman uu ahaa ardayga Sheekh Aboud Rogo oo sanadkii 2012 lagu dilay magaalada Mombasa.